မသန်စွမ်းကလေးတွေနဲ့ ….သင်္ကြန်အကြိုနေ့လေးမှာ… ရေအတူကစားခဲ့တဲ့… အေးမြတ်သူ – ရွှေအလင်း
သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူက သင်္ကြန်အကြိုနေ့လေးမှာ ကျိုက်ဝိုင်းမသန်စွမ်းကျောင်းက ကလေးလေးတွေနဲ့အတူ ရေကစားခဲ့ပါတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ မမြတ်လေးရယ်။
သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူက ဒီနေ့(ဧပြီ၁၃ရက်) သင်္ကြန်အကြိုနေ့လေးမှာ ကျိုက်ဝိုင်းမသန်စွမ်းကျောင်းက ကလေးလေးတွေနဲ့အတူ ရေကစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း သူတို့နဲ့ ရေမဆော့ရရင် မပြီးပြည့်စုံဘူးလို့ အေးမြတ်သူက ပြောထားပါသေးတယ်။
“သင်္ကြန် ဆို သူတို့လေးတွေ ကိုယ့် ကို မျှော်တက်နေပြီ…..ရေတူတူဆော့ ဖို့ …သီချင်းတွေနဲ့တူတူက ဖို့ မျှော်တက်နေကြပြီ။ချစ်တယ် ။သင်္ကြန်မှာ သူတို့နဲ့ရေမဆော့ရရင် မပြီးပြည့်စုံဘူး ။ ပျော်ရွှင်စရာသင်္ကြန်အကြိုနေ့လေးပါရှင်” လို့ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဧပြီ(၁၃) ရက်နေ့က ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အေးမြတ်သူက သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း မသန်စွမ်း ကလေးလေးတွေ နှစ်တိုင်း အတူတူ ဖြတ်သန်းဖြစ်တာပါ။ ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ သူမရဲ့ ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း အချစ်ပိုနေကြပါတယ်။ အေးမြတ်သူဟာ မကြာသေးခင်ကမှ အကယ်ဒမီ ပူပူနွေးနွေးရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးပါ။ သူမဟာ ‘’နောင်တွင် ဥဒါန်းတည်စေသတည်း’’ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပုိ့ဆုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ ဒီဆု ကတော့ သူမအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိတဲ့ အကယ်ဒမီဆုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အေးမြတ်သူ(Aye Myat Thu)ဟာ အနုပညာအလုပ်ကို အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်ကတည်းက စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင်တော့ အသက် ၃၃ နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ၊ တီဗီကြော်ငြာပေါင်း များစွာတို့ကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။
သရုပျဆောငျ အေးမွတျသူက သွင်ျကနျအကွိုနလေ့ေးမှာ ကြိုကျဝိုငျးမသနျစှမျးကြောငျးက ကလေးလေးတှနေဲ့အတူ ရကေစားခဲ့ပါတယျ။ ခဈြဖို့ကောငျးလိုကျတာ မမွတျလေးရယျ။
သရုပျဆောငျ အေးမွတျသူက ဒီနေ့(ဧပွီ၁၃ရကျ) သွင်ျကနျအကွိုနလေ့ေးမှာ ကြိုကျဝိုငျးမသနျစှမျးကြောငျးက ကလေးလေးတှနေဲ့အတူ ရကေစားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သွင်ျကနျရောကျတိုငျး သူတို့နဲ့ ရမေဆော့ရရငျ မပွီးပွညျ့စုံဘူးလို့ အေးမွတျသူက ပွောထားပါသေးတယျ။
“သွင်ျကနျ ဆို သူတို့လေးတှေ ကိုယျ့ ကို မြှျောတကျနပွေီ…..ရတေူတူဆော့ ဖို့ …သီခငျြးတှနေဲ့တူတူက ဖို့ မြှျောတကျနကွေပွီ။ခဈြတယျ ။သွင်ျကနျမှာ သူတို့နဲ့ရမေဆော့ရရငျ မပွီးပွညျ့စုံဘူး ။ ပြျောရှငျစရာသွင်ျကနျအကွိုနလေ့ေးပါရှငျ” လို့ သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ဧပွီ(၁၃) ရကျနကေ့ ရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။
အေးမွတျသူက သွင်ျကနျရောကျတိုငျး မသနျစှမျး ကလေးလေးတှေ နှဈတိုငျး အတူတူ ဖွတျသနျးဖွဈတာပါ။ ခဈြဖို့ ကောငျးတဲ့ သူမရဲ့ ပုံလေးတှကေိုကွညျ့ပွီး ပရိသတျတှလေညျး အခဈြပိုနကွေပါတယျ။ အေးမွတျသူဟာ မကွာသေးခငျကမှ အကယျဒမီ ပူပူနှေးနှေးရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးပါ။ သူမဟာ ‘’နောငျတှငျ ဥဒါနျးတညျစသေတညျး’’ ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့ အကောငျးဆုံး အမြိုးသမီး ဇာတျပုိ့ဆုကိုရရှိခဲ့တာပါ။ ဒီဆု ကတော့ သူမအတှကျ ပထမဆုံးအကွိမျရရှိတဲ့ အကယျဒမီဆုလညျး ဖွဈပါတယျ။
အဆိုတော် ဝန၏ ပရိတ်သတ်များနှင့် မီဒီယာများ ထံသို့ အထူးမေတ္တာရပ်ခံချက်
သားလေး Liam ကိုကြည့်ပြီး အသည်းတွေအရမ်းယားလာပြီနော် 😍😍😍😭
“အမျိုးသားတစ်ဦး တရားရုံးထဲဝင်ပြီး တရားသူကြီးအား လက်သီးနဲ့ ထိုးပြီး ဓါးနဲ့ ခုတ်”
“Breaking News ! Huawei ဖုန်း သုံးနေသူများအတွက် သတင်းဆိုး…. “
“စာမေးပွဲဖြေဆိုနေသော ကျောင်းသူလေး မူးလဲ”
“အလှူရှင် မရှိလို့ပါ လှူချင်သူတွေ… သွားရောက် လှူဒါန်းနိုင်ရန်...
၂၀၁၉ မှာ တွေ့မြင်ရနိုင်တဲ့ ခေါက်စမတ်ဖုန်း (၅) မျိုး